Ciidamo Milateri Oo Qarax Miino Lagula Eegtay Duleedka Muqdisho. – Awdalmedia
Qarax nuuca miinada dhulka lagu aaso ayaa maanta ka dhacay deegaanka KM13 ee duleedka Muqdisho, waxaana qaraxan lala eegtay gaari nuuca dagaalka ah ay lahaayeen ciidanka milatariga.
Goobjoogayaal ayaa ku waramay in qaraxa uu haleelay gaari tikniko ah oo laamiga marayay, waxaana qaraxa la sheegay in ay ku dhaawacmeen sadex askari oo kamid ahaa ciidankii la socday gaariga la qarxiyay.
Ciidamada milatariga ee qaraxa lagu weeraray ayaa rasaas badan furay marka uu qaraxu dhacay kadib, ciidamada ayaana daqiiqado kooban xiray aaga uu qaraxu ka dhacay iyadoona markii dambe xaalada kusoo laabatay sidii caadiga aheyd.
Laamiga isku xira magaalada Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxaa ku badan qaraxyada miino ee lala eegto gaadiidka dagaalka ay wataan ciidanka dowlada Soomaaliya iyo kuwa Nabad ilaalinta u jooga dalka ee AMISOM.